October 8, 2021 - kapurionline
झाडापखाला प्रभावित स्थानमा बिरामी घट्दै, निको हुनेको दर बढ्दै
Posted on October 8, 2021 October 8, 2021 by कपुरी अनलाइन
चन्द्रौटा,कपिलवस्तु । राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठान (हुर्फान) कपिलवस्तुको टोली स्वास्थ्य सामग्रीसहित झाडापखाला प्रभावित स्थानमा पुगेको छ । प्रतिष्ठानका जिल्ला अध्यक्ष विष्णु प्रसाद खतिवडा नेतृत्वको टोली कृष्णनगर नगरपालिका ९, बहादुरगञ्जस्थित नेपालकै दोस्रो पुरानो शिवराज अस्पतालको अनुगमन गरेको हो ।
विगत पाँच दिनदेखि त्यस क्षेत्रमा झाडापखाला फैलिएर अस्पतालमा उपचाररत विरामीहरुको अवस्थाबारे बुझ्न हुर्फान कपिलवस्तुको टोली त्यहाँको स्थलगत अनुगमन गरेको हो । त्यहाँ पुगेको हुर्फान टोलीले कृष्णनगर नगरपालिकाका नगरप्रमुख रजत प्रताप शाह र अस्पतालका प्रमुख डा. मुकेश कुमार चौधरीलाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको थियो । टोलीले १८ पेटी पानी, ५सय १० पाकेट जीवनजल र ३सय पिस माक्स हस्तान्तरण गरेको हुर्फान अध्यक्ष विष्णुप्रसाद खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
अस्पतालको अनुगमन गर्दै हुर्फान कपिलवस्तु अध्यक्ष खतिवडाले विरामीहरुको ज्यान बचाउन स्वास्थ्यकर्मीले खेलेको भुमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो । साथै खानपान र स्वास्थ्य सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो । टोलीसँगै हुर्फान केन्द्रिय परिसद सदस्य भूमिराज भट्टराई, जिल्ला सहसचिव भक्ति पौडेल, सक्रिय सदस्य लेखनाथ घर्ती, अनिता आचार्य भुसाल, अकोराब लुम्बिनी प्रदेश सदस्य एवं रेडियो भ्वाइसका अध्यक्ष शरद अधिकारीको सहभागिता थियो ।
यता अस्पतालका डा. मुकेश कुमार चौधरीले अहिले झाडापखालाका प्रभाव न्यून हुँदै गएको जानकारी दिनुभयो । दुई तीन दिनसम्म उपचारमा निकै समस्या झेल्नुपरेको सुनाउँदै अहिले निको हुनेको संख्यामा वृद्धि भएको बताउनुभयो । डा. चौधरीका अनुसार ४सय ६१ जना विरामी भएकोमा ३सय ६६ जना निको भई घर फर्किसकेका छन् । उपचाररत बिरामीमध्ये ३७ जना रेफर भएका छन् भने ८जना जटिल, ४० जना मध्यम र १० जना सामान्य रहेका छन् । “आज मात्र ३१ जना थप बिरामी भर्ना भएका छन्” –डा. चौधरीले भन्नुभयो । पानीमा मलमुत्रमा पाइने किटाणु फैलिएका कारण झाडापखाला फैलिएको डा. चौधरीको भनाई छ ।
यस्तो महामारीको बेला हुर्फानले गरेको सानो सहयोगप्रति कृष्णनगर नगरपालिकाका नगरप्रमुख रजत प्रताप शाहले धन्यबाद दिनुभयो । मानवीय सेवामा हुर्फानले गरेको सानो सहयोग बिरामीका लागि अमूल्य रहेको नगरप्रमुख शाहले बताउनुभयो । अहिले प्रकोपमा निकै कमी आएको बताउँदै नगरप्रमुख शाहले यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन हरेक क्षेत्रबाट भएको सहयोग अतुलनीय रहेको भन्दै सहयोगी मनहरुप्रति आभारी रहेको बताउनुभयो ।
Posted in कपुरी विशेष, स्वास्थ्यLeaveaComment on झाडापखाला प्रभावित स्थानमा बिरामी घट्दै, निको हुनेको दर बढ्दै
दलित विपन्न बालबालिकाहरुलाई झोला सहयोग
Posted on October 8, 2021 by कपुरी अनलाइन
चन्द्रनगर गाउँपालिका । बबरगन्ज निवासी समाजसेवी शिवनाथ राउतले आफु शारीरिक रुपले अपाङ्गता भए पनि बिगत ४ बर्ष लामो समय देखि मुसहर बालबालिकाहरुलाइ साक्षरता तर्फ डोर्‍याउनको लागि ए०ए० वाडाको बिर्ताबजारको मुसहरी टोलमा निशुल्क ट्युसन सेन्टर संचालन गरेका उहाँको योगदानलाई जति प्रासंसा गरे पनि कम रहेको शिवनाथ राउतले बताए ।
उक्त ट्युसन कक्षामा अध्यनरत बालबालिकाहरुलाइ दातृ ब्याक्तित्व बाट सहयोग शैक्षिक सामग्री अभिभावकहरुको उपस्थितिमा बिधालय झोला वितरण भएको हो। सर्लाही जिल्ला लालबन्दी न.पा. निवासी मनिषा बख्रेलले आफ्नी जेठी छोरी आध्या ढुङ्गेल को जन्मोत्सव पारेर स्थानीय समाजसेवी राउतले संचालन गर्दै आइरहेको नुशुल्क ट्युसन कक्षामा अध्यन गर्ने बालबालिकाहरुको लागि शैक्षिक सामाग्री र झोला (६० जना बालबालिका को लागि) सहयोग गरेको रायतले बताए ।
Posted in समाचार, स्थानीयLeaveaComment on दलित विपन्न बालबालिकाहरुलाई झोला सहयोग
कपिलवस्तुको कृष्णानगर नगरपालिकामा झाडापखाला बिरामीको संख्या ४६१ पुग्यो ।
सीता बेल्बास,चन्द्रौटा । कपिलवस्तुको कृष्णानगर नगरपालिकामा झाडापखालाको फैलिएको छ । नगरको वडा नं. ७, ८, ९ मा १८ गते रातिदेखि बान्तासँगै झाडापखाला लाग्ने बिरामीको सङ्ख्या ह्वातै बढेको छ ।
चेतनाको अभावका कारण सरसफाईमा ध्यान नदिँदा तथा दूषित पानीका कारण झाडापखालाको प्रकोप बढेको कृष्णनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रजत प्रताव शाहाले बताउनु भयो । साथै प्रकोप फैलियको ठाउँमा चेतना कार्यक्रम सुरु गरेको बताउदै के कारणले झाडापखाला फैलियो भन्ने रिर्पाट शुक्रबार शाझ सम्म आउने पनि बताउनु भयो । यो समाचार तयार पार्दा सम्म ४६१ जना झाडापखालाका बिरामी भर्ना भएको शिवराज अस्पतालका निमित्त प्रमुख डाक्टर मुकेश चौधरीले बताउनु भयो ।
आफुहरुलाई छिमेकि पालिकाबाट पनि सहयोग गरेको डाक्टर चौधरीले बताउनु भयो । अस्पतालमा आउने बिरामीको लागि नि शूल्करुपमा उपचार गदै २४ बिसैँ घन्टा बिरामीको सेवा दिएको शिवराज अस्पतालका इमेरजन्सी इन्र्चाज रवि उपाध्य बताउनु भयो ।स्थानीयहरूले आफुहरु एक्कासि बिरामी परेको बताएका छन् ।
Posted in समाचार, स्थानीयLeaveaComment on कपिलवस्तुको कृष्णानगर नगरपालिकामा झाडापखाला बिरामीको संख्या ४६१ पुग्यो ।